Maatiif nyaataa bittumoo wal'aansa fayyaaf kaffaltu? - BBC News Afaan Oromoo
Maatiif nyaataa bittumoo wal'aansa fayyaaf kaffaltu?
Goodayyaa suuraa Kilinikiin Oliiv Link jedhamu lammiilee Keeniyaa jireenyi baay'ee gad-aanaa jiraatan tajaajila
Maatiif soorata bituumoo daa'ima tokko mana yaalaa geessu? Ijoolleen mana fincaanii/booliitti akka fayyadamuu danda'an kaffaluumoo ofiif qoricha bitachuudha? Kunneen gaaffilee muraasa haadholiin Keeniyaa manneen lammiileen jireenya gadi-aanaa jiraatan keessa jiran of gaafatanidha.
Suusaan Mibulaafi abbaan warraa ishee daa'ima isaanii reefuu dhalattu Piis jedhamtu kunuunsaa jiru. Isheen maatiisheef daa'ima afraffaa yommuu taatu walumaan Naayiroobii keessa bakka gadi aanaa Sinaayi jedhamu jiraatu.
Manni isaanii abbaa kutaa tokkoo ta'e soofaadhaan kan lamatti hiramedha. Manneen ollaa sana jiran bira qabamee yeroo ilaalamu, manni isaanii sirriitti kan qabameefi qulqulluudha.
Naannoon jireenyaa gadi aanaa kun bishaaniifi qulqullina naannoo sirriitti hin qabu. Guyyaa guyyaatti dhimmi xiyyeeffannaan itti kennamu bishaan ga'aa barbaaduudha; kunuunsi fayyaa waan akka qannoodha.
Laammiileen Keeniyaa dhibbantaa 25 ta'an tajaajila inshuraansii fayyaa qabu; warri hafan ammoo yerooma deeman kaffalu; kun namoota hedduu hiyyoomseera jedha Federeeshiniin Kunuunsa Fayyaa Keeniyaa.
Namoota baayyeef kunuunsa fayyaaf qusachuun ykn kaffaltiin duraa hin danda'amu.
Piis ijoollee afran Suusan qabdu keessaa talaallii argachuudhaaf ishee jalqabaati. Kun kan ta'e deeggarsa fayyaa isheen mobaayilii isheerraa qabduuni.
Goodayyaa suuraa Suusaan Mibulaafi abbaan warraashee manasaanii Sinaayi, Naayiroobii keessatti daa'ima isaanii Piisiin baadhatanii
"Ijoolleekoo warra kaaniif rakkoo maallaqa dhabuudhaan baayyee rakkadheen ture. Kaffaltii hospitaalaa kaffaluu hin danda'un ture," jetti Suusaan.
"Erga yeroon darbee booda kilinika deema ture, ergan da'ee ka'ee ji'ootaan booda, akkasumas qorannoo fayyaa barbaachisaa ta'e hedduu hin qabun ture garuu ergan daa'imakoo kana, Piisiin, ulfaa'ee waanan qarshii qusadhee qabuuf yeroo sirriitti kilinika deemuu danda'eera," jetti.
Tajaajila isheen argatte M-Tiba jedhama - innis 'e-wallet' fayyaa M-Pesa irratti Safaricom tiin siistama kaffaltii qarshii karaa mobaayiliitiin taasifamu ta'ee fayyadamtoota miliyoona 19 ol qaba.
"Yeroo rakkoo fayyaa atattamaa qabaatan Keeniyaanonni irra caalaan gargaarsa qarshii hiriyyaafi maatiirraa ykn qabeenya qaban gurguruudhaan argatu," jedha gaggeessaan ol-aanaa Safaricom Boob Koliimoor.
"Kanaaf, M-Tiba kan gargaaru akka qarshii xiqqoo kunuunsa fayyaaf si gargaaruuf qofa qusattudha."
Goodayyaa suuraa Kaffaltiin karaa mobaayilii M-Pesa Safaricom Keeniyaa keessatti hojjechaa jiru baay'ee milkaa'aadha
Tajaajilli kun akka namoonni gargaarsa maallaqaa lakkoofsa herregaa M-Tiba biraatti erganii namoonni gargaarsa kana fudhatan bakka kunuunsa fayyaa eyyamameefi bakka wallaansa fayyaa mirkanaa'etti akka fayyadamanis ni gargaara.
"Yoo shilingii Keenyaa 100 [naannoo 72p] ji'a tokko keessatti qusachuu dandeesse badhaasa shilingii Keenyaa 50 sirriitti waan argannuuf M-Tiba tti qusachuuf filanne," jetti.
Jalqabarratti waa'ee yaada qarshiikoo achitti kuusuu nan shakkan ture," jetti Suusaan. "Irra deddeebiyeen lakkoofsa herregaakoo ilaalaan ture, boodarra garuu qarshiinkoo nagaa ta'uu waanan mirkaneeffadhef qusachuu ittan fufe."
Goodayyaa suuraa Sagantaan tajaajila maallaqaa xixiqqaa karaa mobaayilii jiraachuun tajaajilawwan fayyaa argachuuf faladha
Karaa ergaa jechoota afaanii, bakka jireenya gadi-aanaa Sinayii keessatti ofitti amanuun guddachaa jiraa. Ammaa dhukkubsatoonni %50 gara Olive Link deeman tajaajila M-Tiba fayyadamu, jedha Joseefiin.
Milkaa'ina moodeelii M-Tiba madaaluudhaan, xiinxalaan fayyaa Dr Nelii Boosiir, miseensi Hojjetoota Fayyaafi Boordii Fayyaa Ilkaanii Keenyaa: "Kun uumata keenya %50 ta'aniif mala It probably is a very sustainable method for about 50% of our population, so it makes sense.
Tekinooloojii Biizinasii Biroo
"Kana jechuun kun kan jiru tokkicha jechuu miti, garuu karaa ittiin waliin ga'umsa fayyaa namoota hundaaf ta'e, nuti sirriitti ni fudhanna."
Bu'aan dabalataa biraa tajaajila akkasiirraa argamu daataa/ragaa inni walitti qabudha.
Goodayyaa suuraa Aliis Machiichii akka jettutti daataan/ragaan fayyaa M-Tiba walitti qabu baayyee faayida qabeessa
"Gama amala fayyadama fayyaa uummataatiin daataa/ragaa baayyee gaarii walitti qabame arganne, akkasumallee daataa/ragaa biizinasii - kan akka dhukkuba busaa wallaanuudhaaf baasii hangam akka fudhatu baruuf," jechuun dubbatti Aliis Machiichii PharmAccess Foundation irraa.
"Kun karooraafi sadarkaa imaammataatti hedduu gargaara, sababiinsaas kanarraan imaammata biyya keenyaarraan dhiibbaa geessisuun akka inni dhimma fayyaa sirriitti qabatu taasisuu ni dandenya."
Waggaa lamaan hin caalle darban keessa kilinika Kibeeraa naannoo bakka gadi-aanaa keessa jiru tokko qofatu M-Tiba yaale. Amma kilinikoonni 549 ta'an caalaatti naannoo biyyattii keessaa hiyyeyyii ta'anitti fayyadamaa jiru; kunimmoo namoota akka Suusaaniifi maatiishee carraa tajaajila fayyaa hedduu barbaachisaa ta'e akka argatan taasise.